Malunga nathi - i-Huaian Enyuan Tourist Products Co, Ltd.
Sikudalele iimveliso ezintle kuwe
Siyi-Enyuan Travel Products Co, iSixeko saseHuaian, kwiPhondo laseJiangsu, China. Lishishini elikhulu eliqala ngokukodwa kwimveliso kunye nentengiso yeemveliso zononophelo lomlomo. Le nkampani iye yasekwa ngo-2017. Emva kweminyaka engaphezu kwemithathu yokusebenza nzima kunye nophuhliso, sele waba namandla eyomeleleyo. Ngoku ineqela elinemveliso nelinesakhono, kwaye iimveliso ezahlukeneyo zithunyelwa kumazwe aphesheya. Unobutyebi bamava orhwebo lwangaphandle kunye nethala leemveliso. Iimveliso zenkampani zibandakanya zonke iintlobo zeebrashi zamazinyo zeplastikhi, iibhrashi zoqalo, isikrweqe solwimi, iibhrashi zangaphakathi, iibrashi zamazinyo ezilahlwayo, njl.
Inkampani igubungela indawo ye-5,000 yeemitha zesikwere, apho indawo yokwakha ingaphezulu kwe-4,000 yeemitha zesikwere. Bangaphezulu kwe-100 abasebenzi. Inkampani okwangoku inoomatshini bokuvelisa abangama-40 bebrashi yamazinyo. Ngamashumi amathathu oomatshini bokuvelisa ibrashi yamazinyo kunye nothotho lwezixhobo ezinxulumene nemveliso yokhuseleko. Inani leelayini zemveliso ziyenziwa. Imveliso yemihla ngemihla yeebrashi zamazinyo inokufikelela kuma-200,000. Imveliso yonyaka yeebrashi zamazinyo ezigqityiweyo ifikelela kwizigidi ezingama-50.
Ukusukela ngo-2018, ekuphenduleni kwisithintelo seplastiki saseYurophu, inkampani yethu ihlengahlengise ulwalathiso lweshishini lwangaphakathi ngexesha, igxile kwimbambo eyenziwe ngeplastikhi eyenziwe ngobuqhetseba. Inkampani yaqala ukwazisa umgca wemveliso yebrashi yamazinyo ephambili, kwaye uhlaziya umatshini rhoqo kwaye uhlengahlengisa umgca wemveliso. Ukuvelisa nje iimveliso ezingcono zomlomo. Kule minyaka mibini idlulileyo, inkampani ikwazile ukuvelisa ngaphezulu kwe-40 iindidi zebrashi yamazinyo kunye neebrashi zangaphakathi kunye nezinye iimveliso zamazinyo. Iimveliso zithengiswa kwilizwe langaphandle kwaye ziphumelele ngazwi linye ngokudumisa kubathengi. Umyalelo wonyaka wamabhrashi wamazinyo anokufikelela ngaphezulu kwezigidi ezingama-20.
Inkampani ihlala ihambelana nefilosofi yeshishini "yenyani yokwenyani, umgangatho wokuqala". Ukuzinikela ekuveliseni iibhrashi ezingcono zokunceda abathengi.
Sikudalele iimveliso ezintle kuwe!